हावाहुरीले चितवनको नारायणी पुलमा ट्रक दुर्घटना
चितवन | जेठ ६, २०७९
हावाहुरीका कारण चितवनको नारायणी नदी पुल नजिक ट्रक दुर्घटना भएको छ । तीव्र गतिको हावाहुरीका कारण ट्रक दुर्घटना हुन प्रहरीले जनाएको छ ।
शुक्रबार साँझ भएको दुर्घटनामा ट्रकमा सवार २ जना सामान्य घाइते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पताल पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
शुक्रबार साँझ चितवनसहित देशका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षा भएको छ ।
भरतपुरको पछिल्लो मतपरिणामः रेनुको अग्रता कायमै
नेपालमा पहिलोपटक भेटियो ओमिक्रोनको नयाँ भेरियन्ट
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टको नयाँ प्रजातिको फेला परेको छ । काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल अस्पतालको प्रयोगशाला गरिएको अणुवांशिक (जीन सिक्वेन्सिङ) अध्ययनमा ओमिक्रोन भेरियन्टको नयाँ प्रजाति...
सडकमा खाल्डो परेपछि बिरूवा रोपेर विरोध, स्थानीयले गरे 'इञ्जोय' ! [भिडियोसहित]
भारतको एक गाउँमा स्थानीय सरकारले खाल्डो नपुरेपछि त्यहाँका स्थानीयले नौलो शैलीमा विरोध जनाए । उनीहरूले सडकको बीचमा बनेको खाल्डोलाई पर्यटकीय जस्तो क्षेत्र बनाएर व्यंग्य गरे । उनीहरूले व्यंग्यात्म...
बैंकहरूमा २ दिनमै थपियाे २५ अर्ब निक्षेप, तरलता संकट टर्न लागेको हो ?
पाँच वाम नेता भेटको सन्देश : सके चुनावअघि नै एकता, नसके एमालेबाहेकको वामपन्थी मोर्चा